လူသားခုံမင်သူ – ကြည်မိုးကောင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Contributor, Columnist » လူသားခုံမင်သူ – ကြည်မိုးကောင်း
လူသားခုံမင်သူ – ကြည်မိုးကောင်း
Posted by kai on Jun 24, 2016 in Contributor, Columnist, Creative Writing, My Dear Diary | 13 comments
စင်စစ်လူသည်အသားစားသတ္တဝါမဟုတ်ပေ။ အသားစားသတ္တဝါတို့တွင် အစွယ်နှင့်ရှည် လျားချွန်ထက်သောခြေသည်းလက်သည်းတို့
ပါရှိသည်။ သားကောင်ဖမ်းသည့်အခါတွင်မှ ထုတ်သုံးလေ့ရှိသဖြင့်သာမာန်အား ဖြင့်မမြင်နိုင်၊ မတွေ့နိုင်ပေ။ ထို့ကြောင့်မြန်မာစကား၌ ကြောင်လက်သည်းဝှက်ဟု ခိုင်းနှိုင်းလေ့ရှိကြသည်။ ရေကိုသောက် သည့်အခါတွင်လည်း လျှာဖြင့် ပလက်ပလက်မြည်အောင်လျှက် သောက်တတ်၏။ အစာဟောင်း အိမ်၌ အသားငါးတို့အလွန် အပုပ်မြန် တက်သဖြင့် အစာဟောင်းမြန်မြန်စွန့်ထုတ်ပစ်နိုင်ရန်လိုအပ်၏။ ထို့ကြောင့်အသားငါးသတ္တဝါတို့၌ အူသည်အလျှားတိုရသည်။အခန်းတစ်ခုထဲ၌ လိမ္မော်သီးတစ်ခြင်းပုပ်နေလျှင် မသိသာသော်လည်း ကြွက်တစ်ကောင်သေနေပါက မနေနိုင်မထိုင်နိုင်အောင် အနံ့ဆိုးလှသည်။ အသီးအနှံသည် သားငါးတို့ကဲ့သို့ အပုပ် မမြန်သောကြောင့် သီးနှံစားသတ္တဝါ တို့၏ အူအကန့်သည် ရှားလျားသည်။
ထိုအချက်တို့ကိုနှိုင်းယှဉ်၍ လေ့လာကြည့်မည်ဆိုပါက လူသည် အသားစားသတ္တဝါ အမျိုးအစား၌ မပါဝင်ကြောင်း ပေါ်လွင်သိသာပါသည်။ လူ၏အူမှာလည်း မထင်မှတ်လောက် အောင် ရှည်လျားလှပါပေသည်။
သို့သော်လူတို့သည် အမဲသားငါးတို့ကိုနေ့စဉ်လိုလို တရှိုက်မက်မက်စား သောက်နေကြပေသည်။
လွန်ခဲ့သော ၁၉၇၈ခုနှစ်ပတ်ဝန်းကျင်ခန့်က မြန်မာပြည်တွင် လူသားကိုလူကပြန်၍စား သောက်နေခဲ့သော ဖြစ်ရပ်သည်ရှိခဲ့ဖူး၏။ ဖြစ်ရပ်မှန်သော်လည်း ယနေ့အသက်လေး ဆယ်အရွယ်ရှိသူများပင် ကောင်းစွာသိမိလိုက်ကြမည်မဟုတ်ပေ။ ရန်ကုန်မြို့တောင်ဥက္က လာပမြို့နယ်၊ အမှတ်(၁)ကျောင်းဝိုင်းရှိ သီရိမင်္ဂလာကန်ပေါ်ကျောင်း၌ ဦးလာဘဟူသောသင်္ကန်း ဝတ်တစ်ဦးရှိခဲ့ဖူးသည်။ သူ့၌မယားပါ သမီး(၁)ယောက်နှင့် မယားပါသား(၂) ယောက်ရှိခဲ့ဖူး၏။ မယားပါသမီးဖြစ်သူ မသန္တာမင်း (၁၈)နှစ်(အမည်လွှဲ)က ရန်ကုန် -မော်လမြိုင်ရထားဖြင့် မှောင်ခိုကုန်ကူးသည်။ မယားပါသား(၂)ယောက် ကိုလည်း ကိုရင်ဝတ်ပေး ထားသည်။
ဒုစရိုက်သမားအချို့ကပြင်ပ၌ ခိုးဆိုးနှိုက်အမှုများ ကျူးလွန်ခဲ့ကြပြီး ဦးလာဘကျောင်း အတွင်းသို့ ဝင်ရောက်ခိုလှုံခဲ့ကြသည်။ သူတို့အတွက်က ထိုကျောင်းသည် လွတ်မြောက်ရာ နယ်မြေဖြစ်နေသည်။ ရဲက ဦးလာဘကျောင်းအတွင်း ဝင်ရောက်မရှာဖွေရဲ ဝင်မဖမ်းရဲ၊
ထိုအလစ်သုတ်သမားများကို ဦးလာဘက အရက်ဝိုင်း၊ ဖဲဝိုင်းတို့ဖြင့် ကောင်းစွာဧည့်ခံ ထားသည်။ ထိုကြောင့် ထိုသီရိမင်္ဂလာကံပေါ်ကျောင်းသည် ဒုစရိုက်ရိပ်မြုံဖြစ်နေခဲ့၏။ ထိုရိပ်မြုံ၌ ခုံလုံလာကြသော ငမိုက်သားတို့သည် ဦးလာဘအလွန်ကြိုက်သော ဟင်းလျာများ ဖြစ်ကုန်ကြ၏။
ကျောင်းနားပတ်ဝန်းကျင်၌ ကလေးအချို့ပျောက်ပျောက်သွားတတ်ခြင်းကြောင့် မိဘများကသင်္ကာမကင်း ဖြစ်ကြသည်။ ရပ်ကွက်မှသတိထားစောင့်ကြည့်သည့်အခါ ကျောင်းတွင်း၌ ဒုစရိုက်လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်နေသည်ဟု ယူဆလာကြပြီး တိုင်ကြသည်။ တိုင်စာများတိုင်စာ
ဌာနသို့ မကြာမကြာရောက်လာသော်လည်း အမည်မဖော်သော ပစ်စာတိုင်စာများသာဖြစ်နေသဖြင့် ဖတ်ပြီးအမှု၌သာတွဲထားခဲ့
ရသည်။အမည်ဖေါ်ပြတိုင်ကြားခြင်း မရှိသော တိုင်စာများကို အရေးမယူရဟူသော ညွှန်ကြားချက်ကရှိသဖြင့် ဖိုင်၌တိုင်စာစာရွက်တို့ထူသထက်သာပို၍ထူလာ၏။
ရဲပင်ဝင်မရှာရဲသောကျောင်းတွင်းမှတင်းကို တိုင်သူတို့ဖက်မှ မည်သို့မည်ပုံသတင်းရသွားကြသည်မသိ။ ဦးလာဘက ကလေးတွေဖမ်းပြီး သတ်စားနေသည် ဟုပင် တဆင့်ထပ်၍တိုင်ကြားလာကြပြန်သည်။ ထုံးစံအတိုင်းပင် ပစ်စာတိုင်စာ အဆင့်တွင်သာရှိနေ၏။ ထိုအချိန်က သံဃာအဖွဲ့အစည်းအခြေခံစည်းမျဉ်းတို့၊ ဝတ်နည်းဓမ္မကံမှုခင်းများ ဖြေရှင်းဆုံးဖြတ်ရေးဆိုင်ရာဥပဒေတို့၊ သံဃာအဖွဲ့အစည်းအဆင့်ဆင့်တို့ အခုလို မပေါ်ပေါက်သေး သောကာလဖြစ်၍ ဘုန်းကြီးတွေဘာလုပ်လုပ် ဖမ်းဆီးအရေးယူရန် အလွန်ခက်ခဲသည်။
သို့သော်သည်အခါမှာဖြင့်ဦးလာဘဇာတာညှိုးပါပြီ။ ဆရာဝန်တစ်ဦးကအမည်ဖော်ပြ၍တိုင်သည်။ ကလေးမိဘတစ်ဦးကလည်း သူ့သားဦးလာဘ ကျောင်းနားတွင် ပျောက်သွားသဖြင့်မိဘအမည်ဖော်ပြ၍ တိုင် လာပါတော့သည်။ ထိုအခါကျမှ လိုအပ်သည် များကို မိမိကိုယ်တိုင်ကွင်းဆင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီး သဘောထားမှတ်ချက်နှင့်တကွ ပြန်လည်တင်ပြပါဟူသော ညွှန်ကြားချက်ကို တိုင်းပြည်သူ့ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌထံမှရရှိသည်။ ဦးလာဘကိုရုံးသို့ ခေါ်ယူစစ်ဆေးပြီး သူ၏ထွက်ဆိုချက်များကို ကတ်ဆက်တိပ်ခွေဖြင့် မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ကြသည်။ လား…လား…. ဦးလာဘ ကလည်း ပေါ့ပေါ့လူမဟုတ် ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီကော်မီတီဝင်လည်းဖြစ်နေသေး၏။
သူသည်ကလေး၊လူကြီး စုစုပေါင်းတစ်ဆယ့်နှစ်ဦးအသားကိုစားခဲ့၏။သူကိုရင်ဝတ်ပေးထားသော ကလေး(၂) ယောက်လဲ လူသားကိုစားကြ
သည်ဆို၏။သူ၏သားကောင်များမှာကျောင်းနားသို့မယောင်မလည် ရောက်လာကြသော ကလေးအချို့နှင့် ပြင်ပ၌ခါးပိုက်နှိုက် အလစ်သုတ်ပြီး ကျောင်းထဲဝင်ရှောင်နေကြသော ခိုးဆိုးနှိုက်ဒုစရိုက်သမားများဖြစ်ကြသည်။
ထိုသူများမူးမူးရူးရူးဖြင့် အိပ်ပျော်နေစဉ် ခေါင်းကိုရဲဒင်းဖြင့်ထုပြီး ဟင်းလျာအဖြစ် ချက်ပြုတ်စားသောက်နေခြင်းဖြစ်၏။ ထိုအခြေအနေမဲ့တို့ လူမြင်ကွင်း၌ပျောက်နေ သော်လည်း မည်သူကမျှအရေးတယူ လူပျောက်မတိုင်ခဲ့၍လည်း ဦးလာဘအတွက် ဟင်းလျာဈေးကွက်မိနေခြင်းဖြစ်သည်။
လူ လူချင်းပင် လူ၏အသားကိုနှစ်သက်စွာစားနေသော ဦးလာဘသည် သူ့အတွက် ဘာမျှမထူးဆန်းသလို ဘာမျှထူးထူးဆန်းဆန်း
သူ့ကိုစစ်ဆေး မေးနေစဉ်အခိုက် “ အင်း….သူ့ကိုတို့ကသာခေါ်စစ်နေတာ၊ သူကတို့တွေကိုကြည့်ပြီး သရေများကျနေမလားမသိ ” ဟု စာရေးသူတွေးမိသေး၏။ ဘာကြောင့် လူသားစားတာလဲဟူသောမေးခွန်းကို ပေါရိဿရဆေးထိုးထားလို့စားရတာ ဟု ပေါ့ပေါ့ပါးပါးပင် သူကဖြေသွားသည်။
ဦးလာဘကို သေဒဏ်ချမှတ်လိုက်သော်လည်း ထိုကာလက သေဒဏ်ဆိုသည်မှာ ထောင်အနှစ်(၂၀)သာဖြစ်သည်။ မြန်မာပြည်၏
အစဉ်အလာအတိုင်း လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် အကြိမ်ကြိမ်ရရှိပြီး ပြစ်ဒဏ်မှလွတ် မြောက်သွားကြောင်းသိရသည်။ ထိုကာလက ဦးလာဘထောင်ကလွတ်လာပြီး ဒို့မြို့ဒို့ရွာ ဘယ်တောဘယ်တောင်မှာရောက်နေတယ်ဟု ကောလာဟလ စကားကြားရုံနှင့်ပင် ကလေးရောလူကြီးပါကြောက်ကြသည်။ အသွားအလာ ဆင်ခြင်ကြသည်။ စာရေးသူရန်ကုန်တိုင်း၌ နောက်ဆုံးဆောင်ရွက်ခဲ့ရသောကိစ္စမှာ အင်းစိန်ထောင်ရှိဦးလာဘကို သင်္ကန်းချွတ်လူဝတ်လဲဖို့ ဆောင်ရွက်ရခြင်းဖြစ်သည်။
စင်စစ်လူသည် အသားစားသတ္တဝါအမျိုးအစား၌မပါ။ ထိုလက္ခဏာ များလည်းမရှိ။ သို့သော် ထိုလူသားသည် အခြားတိရိစ္ဆာန်အသားများကိုသာမက ဇာတ်တူသားကိုပင်စားခဲ့လေပြီ။
မှတ်ချက်။ ။ မြန်မာ့ဂဇက် ဇူလိုင်၂၀၁၆ထုတ်တွင် ပုံနှိပ်ဖေါ်ပြပြီးဖြစ်သည်။
ဦးလာဘ သတင်းတွေ ကြားပြီး…. ကိုယ်တွေ အပြင် ထွက် ဆော့ရမှာ လန့်ခဲ့ဖူးတယ်။
လူကြီးမိဘတွေကလည်း သားသမီးတွေကို ဦးလာဘနဲ့ ခြောက်လှန့် သတိပေးခဲ့ရတာ ပြန်သတိရ…
အခု အသက်ကလေး ရလာတော့…
လူသားကို အစိမ်းလေး စားချင်နေတာ..
အထိုင်ချပြီး Blue country ကို မပြန်တော့တာ
အဲ့ တုန်းက ဒီဂဇက်ရွာသာရှိနေခဲ့ ရင်
ဦးလာဘက အရသာရှိသော လူသားဟင်းလျာချက်နည်းများ ဆိုပြီး
ကောင်းကောင်းကြားဖူးခဲ့သပေါ့…ဒါတင်မက ရန်ကုန်က စားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်(ခေါက်ဆွဲဆိုင်ထင်၏)
၁၉၇၆ -ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်မြို့၌ နာမည်ကျော် ဦးလာဘဆိုသည် တကယ်ရှိခဲ့ပါသည်။ သင်္ကန်းဝတ်ထားပေမယ့် ဘုန်းကြီးဟု ပြောဖို့ ကတော့ ခက်ပါသည်။ သူ့၏ကျောင်းက အခု တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ပါရမီလမ်းမဘေးက ၂ဝိုင်း တို့ ၃ဝိုင်း တို့ဆိုပြီး အခုခေါ်နေကြတဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေ အများကြီးရှိတဲ့နေရာ။ အဲဒီကာလတုန်းကတော့ အခုလိုလူနေအိမ်ခြေမစိတ်သေးပဲ မြို့အစွန်အဖျားလို ဖြစ်နေခဲ့သည်။ ဘုန်းကြီးကျောင်းငယ်လေးတွေကတော့ ဟိုတစ်ကျောင်းဒီတစ်ကျောင်းရှိနေခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီထဲမှာ ဦးလာဘ၏ ကျောင်းလဲတစ်ကျောင်းအပါအဝင်ပေါ့။ ဦးလာဘရဲ့ကျောင်းမှာ သူ့ရဲ့မိန်းမဖြစ်သူနဲ့ သားဖြစ်သူတို့ပါ အတူနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။သားဖြစ်သူက ဦးလာဘအတွက် ဒိုင်ခံလူသတ် ပေးပြီး မိန်းမဖြစ်သူက ဦးလာဘအတွက် ပြင်ဆင်ချက်ပြုတ်ပေးကြပါတယ်။ ဦးလာဘရဲ့ လူသားစားဇာတ်လမ်းကြီးပေါ်ပေါက်လာရတာကတော့ တနေ့ထက်တနေ့ အဲဒီပတ် ဝန်းကျင်မှာ လူပျောက်မှုတွေများများလာတယ်။ စုံစမ်းလိုက်တဲ့ အခါမှာလဲ အများစုက အဲဒီဘုန်း ကြီးကျောင်းတွေနားတဝိုက်မှာ နောက်ဆုံးမြင်လိုက်တွေ့လိုက်ရတာမျိုးတွေပဲ ဖြစ်ဖြစ်နေတယ်။ သဲလွန်စလဲရှာမရသတင်းအစအနလဲ မရဖြစ်နေပေမယ့် ဒီနားကဘုန်းကြီးကျောင်းတွေနဲ့ ပတ် သတ်မှုတခုခု ရှိမယ်ဆိုပြီး အဲဒီနားတဝိုက်ကို အမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်နေခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ အမှုပေါ်မယ့်နေ့မှာ လူငယ်တယောက်ဟာ ဦးလာဘကြီးရဲ့ကျောင်းကို ညနေစောင်းအချိန် လောက်မှာရောက်လာခဲ့ ပါတယ်။သူပြန်မယ့် အချိန်ကျတော့ ဦးလာဘရဲ့ကျောင်းထဲက အထွက် မှာ ဦးလာဘရဲ့သားဖြစ်သူက အနောက်ကနေဓါးနဲ့ခုတ်ပါတယ်။ ကံကောင်းစွာနဲ့ လူငယ်ကို ချက် ကောင်းမခုတ်မိတာကြောင့် အဲဒီလူငယ်ဟာ သွေးသံတရဲရဲနဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းဝန်းထဲကနေ ပြေး ထွက်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီမှာပဲ အဆင်သင့်စောင့်ကြည့်နေတဲ့ သက်ဆိုင်ရာတွေရော ပတ်ဝန်းကျင်ကပါ ရောက်လာပြီး အကျိုးအကြောင်းမေးတဲ့အခါမှာ ဘာရန်စမှမရှိပဲ ဦးလာဘရဲ့ သားဖြစ်သူကဓါးနဲ့ ခုတ်တဲ့ အကြောင်းသိရတာမို့ ဦးလာဘရဲ့ကျောင်းဆီကို ဝင်ရောက်မေးမြန်းစစ်ဆေးကြပါတယ်။ ကျောင်းထဲကို ဝင်စစ်ကြတဲ့ အခါမှာတော့ ရာဝင်အိုးကြီးတွေထဲမှာခုတ်ဖြတ်ဆားစိမ်ထားတဲ့ လူ့ ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းတွေကို တွေ့ရှိကာ ဦးလာဘရဲ့ ကြောင်မက်ဖွယ်ရာဇာတ်လမ်းကြီးကို ဖေါ် ထုတ်ဇာတ်သိမ်းလိုက်နိုင်ပါတော့တယ်။
ရက်သတ္တပတ်များစွာ စစ်ဆေးပြီးတဲ့နောက်မှာ ဦးလာဘကြီးကိုသေဒဏ်စီရင်ချက်ချမှတ်ခဲ့တယ် လို့ ပြောပါတယ်။ စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာတော့ ဦးလာဘကြီးဟာ လူသားစားပြီးကျင့်ကြံရတဲ့ ကျင့်စဉ် တခုကို ကျင့်နေတဲ့အကြောင်း နောက်ထပ်လူသားအနည်းငယ်စားပြီးတဲ့ အခါမှာသူ့ရဲ့ကျင့်စဉ်ဟာ ပြီးမြောက်တော့မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်း လူသားစားတဲ့အခါမှာလည်း နေ့သင့်နံသင့်သားတွေကို ရက် အလိုက်စားရတာဖြစ်ကြောင်း အခင်းဖြစ်တဲ့ရက်က နေ့သင့်နံသင့် လူသားစားရန်လက်ကျန်မရှိ တော့တဲ့ အချိန်မှာ ကျောင်းကိုလာနေကြ လူငယ်ဟာ နေ့နံသင့်နေတာမို့ သတ်ရန်အကြံအစည်မ ရှိပဲ သတ်ခိုင်းခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းတွေကို ဖြောင့်ချက်ပေးသည်ဟု သိရပါသည်။
ဒါက … ဝီကီက ၊ သွားကြည့်တဲ့ ဦးလေးပြန်ပြောပြတာနဲ့လည်း ကိုက်ညီတယ်….
၁၉၇၇ ရန်ကုန်မြို့ တဥက္ကလာ ၅ရပ်ကွက်မှာ မွေးပါတယ်။ အိမ်နောက်က ပါရမီလမ်းပါ ၆အိမ်ကျော်ရင် လမ်းကြားရှိတယ် အဲ့ကထွက်ရင် ၃ဝိုင်း ဆိုတော့ ခေး ၃နှစ်လောက်မှာ အခြောက်ခံရတာနက် ၇နှစ်လောက်မှာ ကြားရတဲ့ အခြေအနေက မတူဘူးလားလို့စ်
နောက်ပီး ၁/၂/၃/၄ ဝိုင်းနောက်မှာက ငမိုးရိပ်ချောင်းထဲ စီးတဲ့ ချောင်းလက်တက်လေး ရှိတယ် ဘယ်အထိလဲဆို ကေတုမာလာက ဘီအီးဒီ အောင်သိုက်အိမ်နောက်ဖေးထိ
ဦးလာဘဟာ ဝင်းမော်ဦးလို ဆွမ်းခံရင်း ငှက်သင့်သွားပါကြောင်း အဟိ ဆွဲထည့်တာ
မယုံလို့ ကိုယ်တိုင်သွားကြည့်တဲ့ (တရားခွင်ပါ သွားစောင့်တာ) မွေးသမိခင်ရဲ့မောင် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား ဦးလေး ပြန်ပြောပြတာ အဲသည့်တုန်းက ငယ်သေးပေမည့် လုံးစေ့ပတ်စေ့ အကုန်နားလည် မှတ်မိတယ် ။ ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီကော်မီတီဝင် ယူဂျီဆိုတာက ထိုးဇာတ် ၊ ကွန်မြူနစ်နဲ့လည်း အသေအကြေဆော် ၊ ကွန်မြူနစ်ဝါဒကိုလည်း အသည်းအသန်တိုက်ဖျက်နေချိန်ကိုး ။ ဂလိုပဲ မဆလရဲ့ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးသူ စိတ်ဝင်စားသူ ပုန်ကန်မည့်သူတွေအပေါ် အကောက်ကြံတဲ့ လံကြုပ်ထိုးဇာတ်ဆိုပြီး ဟိုဘက်ကလည်း ပြန်ချေတယ် ။
ဘာပဲပြောပြော ဦးလာဘ လူသားစားခဲ့တာကတော့ အမှန်ပဲ…
အမှတ်မမှားရင်….အင်္ဂလန်က ဒေါက်တာအောင်ခင်က.. ရေးဖူးတယ်..။
ဦးလာဘက.. ဗကပရဲ့.. ယူဂျီဖြစ်တာမို့.. အဲဒီခေတ်ထောက်လှမ်းရေးက ပညာပြရှင်းပစ်လိုက်တာဆိုတဲ့သဘောမျိုးပဲ…။
အပေါ်ကစာကို သတင်းစာထဲထည့်ပြီး ပုံနှိပ်ထားပါတယ်..။
အိမ်နားကပဲ သိတယ် ဦးလာဘအကြောင်းကတော့ ငယ်ငယ်ကတည်းက